Ihe Mgbaru Ọsọ nke Akụrụngwa Akụrụngwa na Mgbalị Ahịa | Martech Zone
E nwere ụfọdụ ọnọdụ dị n'ime ụlọ ahịa ahịa dijitalụ nke anyị na-ahụ nke na-enwe mmetụta na mmefu ego na akụrụngwa - ọ ga-aga n'ihu n'ọdịnihu.
Site na ntinye ego, ọrụ mmefu ego ga-eto ntakịrị na 2016, ihe dịka 1.5% nke ego ọrụ zuru ezu. Nrịbawanye a ga - eme ka uto ọrụ a na - atụ anya ya, agbanyeghị, na - etinyekwu nrụgide na ndị na - azụ ahịa iji gbasaa ohere na arụmọrụ yana naanị ntakịrị ihe mgbakwunye. Isi Iyi: ITSMA
Na nkenke, mmefu ego maka ire ahịa dijitalụ na-aga n'ihu na-eto ma ndị ahịa C-larịị ugbu a ka ha ga-aka ma ghọta nke ọma ọdịdị ala ahụ, ngwaọrụ ndị dịnụ, yana mkpesa dị mkpa iji meziwanye nnweta na njide njide nke ụlọ ọrụ. Nyere mgbawa nke ọwa na mkpa na-ebuli maka ọtụtụ, Anyị na-eme ihe na-erughị… na ọ na-aghọ ihe mgbagwoju anya.
mgbe ndị ọrụ ahịa na-arịwanye elu, na-atụ anya ka ndị ahịa na-emekwu ihe na obere na-aga n'ihu. Ọtụtụ n'ime nrụgide ahụ bụ itinye ego na ngwa ahịa nke na-enyere aka belata ọnụ ọgụgụ nke awa mmadụ chọrọ iji zaghachi, atụmatụ, ime ma tụọ mbọ ahịa.
Akpaaka na ọgụgụ isi na-aja ndị ọrụ mmadụ mma, ha anaghị edochi ha
Agencylọ ọrụ anyị na-arụ obere ọrụ maka ụfọdụ nnukwu ụlọ ọrụ. N'oge ọ bụla n'ụbọchị, ikekwe anyị nwere 18 ma ọ bụ ihe ejiri rụọ ọrụ na-arụ ọrụ na ndị ahịa. Site ika ọkachamara, ka oru oru, na-emepụta, mmepe, ka ọdịnaya dere… ndepụta na-aga na na na na na na. Otutu oru a na emezu site na mmekorita ya na ndi otu ndi ozo. Anyị na-emepe atụmatụ ahụ ma ha na-eme atụmatụ ahụ.
Ngwaọrụ bụ otu ụzọ anyị nwere ike isi mee ka ndị ahịa na atụmanya nwekwuo ntụpọ. Anyị na-eji nchịkọta nke dashboard, mkpesa, mbipụta mmekọrịta mmadụ na ọrụ njikwa ngwaọrụ. Ebumnuche nke ngwaọrụ ndị ahụ abụghị akpaaka nke ọrụ anyị, n'agbanyeghị. Ebumnuche nke ngwaọrụ ndị a bụ iwelata oge anyị onwe anyị ga-eji soro ndị ahịa ọ bụla kọwaa ma bulie usoro anyị na-ewepụta.
Dị ka ị na-achọ itinye ego ego maka akpaghị aka arụ ọrụ ụlọ, M ga-agba mbọ hụ na ebumnuche gị abụghị iji dochie ndị mmadụ, ọ bụ ịtọhapụ ha ime ihe ha kacha mma na. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ibibi arụpụtakwu ngwa ahịa gị - na - eme ka ha rụọ ọrụ site na mpempe akwụkwọ na email. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịkarị oke arụpụta, mee ka ịzụta ngwa ọrụ bụrụ ihe kacha mkpa ka ndị otu gị nwee ike inweta ihe niile ọ chọrọ iji merie nke ọma.
N'ikpeazụ, na ihe mgbaru ọsọ nke usoro ahia ọ bụla kwesịrị ịbụ na ọ na-enyere ndị ọzọ na-arụpụta oge na-atụ anya na ahịa, ọ bụghị obere. Nyekwuo ndị ahịa gị ma ị ga-erite uru. Examplesfọdụ ihe atụ:
Anyị na-eji Wordsmith maka ahia iji nyochaa ma chee data Google Analytics n'ụzọ ndị ahịa anyị nwere ike ịghọta karịa. Nke ahụ na-enyere anyị aka ịkọwa usoro ndị a ma nye usoro iji meziwanye karịa iwepụ oge iji kọwaa nchịkọta data.
Anyị na-eji ggbanwe iji nyochaa mgbasa ozi mgbasa ozi na nyocha ọchụchọ na ibe ya na ala. Nweta siri ike, ma ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume, na-enweghị ngwa ọrụ dịka gShift. Ọ bụrụ n ’ị naghị atụpụta nsonaazụ nke usoro ọdịnaya gị n’ụzọ ziri ezi, ị ga-enwe oge siri ike ịkọwa ihe kpatara onye ahịa gị ga-eji tinye ego na ya.
Anyị na-ejiHootsuite, echekwa, na Jetpack iji jikwaa mgbalị anyị na-elekọta mmadụ mbipụta. Mgbe anyị bụ obere otu, anyị na-eme mkpọtụ n’ onntanet. Site na itinye obere oge na mbipụta akwụkwọ, enwere m ike itinyekwu oge iji soro ndị na-ege m ntị na-elekọta mmadụ.
Ngwaọrụ ọ bụla na-enyere anyị aka ilekwasị anya na mbọ anyị ebe ha kwesiri ịdị kama ịdị na-arụ ọrụ ụwa nke ndị ahịa anyị agaghị ele anya. Ha choro nsonaazụ - ma anyị kwesịrị ịrụ ọrụ na ha!
Tags: Analyticsakpaaka ihe mgbaru ọsọngwaọrụ akpaakamarketingakụrụngwa ahịaakuko
Apr 27, 2016 na 9: 28 AM
N'etiti ngwa ahia dijitalụ ndị ọzọ Goole Analytics bụ nke zuru ebe niile ma jiri ya rụọ ọrụ. Kedu ihe omume gị kachasị mma nke mmejuputa Google Analytics na ọnọdụ nke ire ere / mmeta ego?
Apr 27, 2016 na 12: 50 PM
Nke ahụ dabere na onye ahịa ahụ, mana anyị na-achọkarị ịmepụta ọwa ntụgharị nke na-agagharị site na oku na oku ọ bụla ruo n'ókè nke onye ọbịa ahụ batara na saịtị ahụ. Na akụkọ ọdịnala dị mkpa iji belata mgbagwoju anya ndị ahịa.